तनहुँमा एक वर्षीय बालक कोरोना जितेर घर फर्किए ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/तनहुँमा एक वर्षीय बालक कोरोना जितेर घर फर्किए !
त्यस्तै ऋषिङ गाउँपालिका–६ का २८ र २५ वर्षीय युवा पनि कोरोना सङ्क्र`मण मुक्त भएको उपचार केन्द्रले जनाएको छ । चार जनाको नै असार ११ गते दोस्रो पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो । चार जनालाई नै सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लगाएर डिस्चा`र्ज गरिएको छ ।
त्यस्तै शुक्ला गण्डकी नगरपालिका–९ का २२ वर्षीय युवक पनि कोरोना जितेर आज घर फर्किएका छन् । असार ५ गते कोरोना पुष्टि भएका ती युवकको पनि असार ११ गते दोस्रो पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो । शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाप्रमुख अजय श्रीवास्तवले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका पाँच जनामा कोरोना पु ष्टि भएकामा तीन जना उपचारपछि घर फर्किएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी घिरिङ गाउँपालिका–१ का २६ वर्षीय युवा पनि कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् । असार १ गते कोरोना पुष्टि भएका उनको असार ४ गते दोस्रो पिसिआर पोजिटिभ आएपछि असार ११ गते गरिएको तेस्रो पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । ती युवालाई भने आइतबार स्थानीय तहको जिम्मामा डिस्चार्ज गरिने उपचार केन्द्रले जनाएको छ ।
जिल्लामा एक सय दुई जनामा कोरोना पु`ष्टि भएको छ भने १७ जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् । व्यास नगरपालिकाका एक, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका तीन, ऋषिङ गाउँपालिकाका सात, घिरिङ गाउँपालिकाका पाँच, आँबुखैरेनी गाउँपालिका एकजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा ९ जनामा कोरोना संक्र`मण पुष्टि